I-Nissan yami yasendulo, nakuba isesimweni esihle kakhulu seminyaka yami, kodwa yacela isimo sengqondo sokukhathalela nokulungisa njalo. Kunamasevisi amaningi edolobheni lakithi, kodwa mina, njengokujwayelekile, ngithatha okufanelekile kakhulu. Ngamanye amazwi, wayenelisekile ngemisebenzi yomakhelwane. Nginenhlanhla, ngoba intengo nezinga lenkonzo lapha lalihle kakhulu. Kubonakala sengathi konke kuhle, kodwa hhayi ngonyaka odlulile kusukela inkonzo ivaliwe ngenxa yobunzima bokuhweba, ngakho-ke kwakudingeka ngibheke izitolo zokulungisa imoto ngokwami, ngithembele ezintweni ezihlukahlukene. Ngangivame ukucabanga ngami njengomuntu wanamuhla, ngenxa yalesi sizathu ngaqala ukucinga kuyi-Intanethi ngaphandle kokulibala. Nokho, ngokucela "ukugcinwa kwezimoto", "ukuthengiswa kwezinjini" sathola imiyalezo ekhethekile kuphela. Ngangingafuni ukuzibophezela ngenye indlela, ngoba ngangidinga inkonzo yokusebenzisana isikhathi eside, ngaphezu kokubona kuqala inkinga yenkinga kusengaphambili, angikwazi. Abambalwa abaphazamisekile, sebefunde umkhakha "ukuthengiswa kwezingxenye ezisele", ngabuyela ekusesheni kokuqala. Yeka ukuthi ngangilahlekelwa kanjani ifomethi yephephandaba elihle, ngezigaba zayo ezivamile ze-thematic, lapho idatha ithola khona izinga elibonakalayo lokubonakala. Kulula kakhulu ukukhumbula engumemezelo, onombala nomklamo wayo. Sekudlule ngidumala, ngaphendukela ukuthola usizo kumngane ongcono, owatshele mayelana ne-portal-lwemibhalo entsha ezinikezelwe kuphela kumasevisi okulungisa ngokuzenzakalela. Ukuya kule nsiza, ngabona ukuthi lesi akusona isayithi evamile, kodwa ukuthola okungokoqobo abantu abanjengami abathanda ukukhangisa kwephephandaba, kodwa basebenza nge-intanethi ngenxa yenduduzo.
Iziboniso zokubheka amehlo zefomu lephephandaba azigcini nje ngokugxila ekucabangeni, kodwa futhi zisiza ukusheshisa imisho ehlukahlukene. Iso lihlukanisa ngokushesha umlayezo owodwa kusuka kwabanye, ukukhomba ngokunembile inketho oyifunayo. Ngelinye igama, ngangijabula kakhulu. Nganginandaba nama-motor ngesikhathi, kodwa kuthatha isikhathi eside ukulungisa i-chassis. Ngakho-ke, ngangigxile ngokuphelele kuleli qembu, kuhle, ukuhamba ngesayithi kwenza kube lula ukwenza konke ngokushesha. Ukulungiswa kwama-injection kwakungesigaba saso, ngakho ngathola ngokushesha isevisi futhi ngifaka inombolo ekhishweyo evela kumkhangisi. Kuzo zonke, ngichitha imizuzu engaba yishumi, ngenkathi usesho lokuqala kusayithi lithatha izinsuku ezimbalwa. Uma ubona umlayezo wephephandaba wendabuko, uzizwa uthemba ngokumelene nentando yakho, kuhluke ngokuphelele uma ufunda eziningi zezikhangiso ezifanayo. Uyabona ukuthi uma ukukhangisa kunomfanekiso ocacile, kusobala ukuthi kusuka ephephandabeni, kusho ukuthi inkampani ngempela, futhi akuyona into eqanjiwe.
I-elekthronikhi, ukukhokhelwa, ukuthengiswa kwezinjini yilokho ongayithola kalula kusayithi. Ngokushesha ukuxilongwa kwamagetsi kwakudingeka, futhi ngenxa yesayithi, ngathola inkonzo enhle yemoto edolobheni, nakuba kwakudingeka ukuya esifundeni esedlule. Kodwa-ke, lezi ziyizinto ezincane. Siyajabula ngokuthi ukuxilongwa okulandelayo kwe-electronics kwanikezwa mahhala njengobhonasi.
Scooters Double: imodeli, incazelo, izici
Patron Taker 250: ukubuyekezwa, Ukucaciswa, izithombe, isivinini esiphezulu
"I-Java-360." amaphutha ezivamile
Ibhizinisi kwekhanda: izici futhi imithetho indalo yayo
Oluseningizimu ye-eCrimea - lapho kangcono uphumule? Uhlolojikelele, incazelo, amabhishi kanye nokubuyekeza
Ukunemba ngokudubula - laser designator
Isikhwama Shopper - ukhululekile, stylish, amahle